केन्द्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयका निर्देशक डा. केसी भन्छन्, ‘आन्तरिक सुधार नै पहिलो योजना हो’ - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्तर्वार्ता / विचार ∕ केन्द्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयका निर्देशक डा. केसी भन्छन्, ‘आन्तरिक सुधार नै पहिलो योजना हो’
केन्द्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयका निर्देशक डा. केसी भन्छन्, ‘आन्तरिक सुधार नै पहिलो योजना हो’
हेल्थ आवाज बुधबार, २०७६ साउन १५ गते, ०८:४४ मा प्रकाशित
डा. प्रदीप के.सी., केन्द्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयका निर्देशक हुन् । हालमात्रै देशकै सबैभन्दा पुरानो केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयका निर्देशक बनेका डा. के.सी.सँग आयुर्वेद चिकित्साको अवस्था, यसको प्रभावकारिता, केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयको अवस्था, विरामीको चाप, समस्या र भावि योजना लगायत यावत विषयमा हेल्थआवाज डटकमका लागि सिर्जना मगरले गरेको कुराकानीः
केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयका बारेका केही बताइदिनुहोस न ?
यसलाई धेरैले नरदेवी अस्पताल भन्छन् तर यो नरदेवी अस्पतालभन्दा पनि केन्द्रिय आयुर्वेद चिकित्सालय हो । यो नरदेवी भन्ने ठाउँमा छ । यो धेरै पुरानो चिकित्सा प्रदान गर्ने संस्था पनि हो । लगभग हामीले यही साल नै यसको सयौं वार्षिकोत्सव मनाएका छौं । यो वि.सं. १९७४ सालमा स्थापना भएको अस्पताल हो । तर, त्यो बेला पढाउने तथा उपचार गर्ने एकै ठाउँमा हुन्थ्यो । यसले हालसम्म अविछिन्न रुपमा काम गरिरहेको छ ।
चिकित्सालयले के कस्ता खालको सेवा विरामीलाई प्रदान गर्दै आएको छ ?
यो चिसिकत्सालयको नामै छ, आयुर्वेद चिकित्सालय । यसमा आयुर्वेदका विभिन्न चिकित्सकीय पद्धति र विधिहरुमार्फत उपचार गराइन्छ । यसभित्र आयुर्वेदका विभिन्न विधाहरु जस्तैः काय चिकित्सा–जो शरीरको आन्तरिक अंगहरुमा लाग्ने रोगहरुको बारेमा उपचार गर्ने विभाग हो । यस विभाग अन्तर्गत स्नेहन, स्वेदनका साथै पञ्चकर्म चिकित्सा पनि रहेको छ । त्यस्तै, अर्काे शल्य चिकित्सा विभाग छ, जसमा विभिन्न शल्य अर्थात् बाह्य पीडादायक वस्तुहरुलाई शरीरबाट बाहिर निकालेर उपचार गरिन्छ । जस्तै अहिले अर्श, भगन्दर अर्थात् मलद्वारको वरिपरी पिप निस्कने मार्ग बन्ने समस्या आदिमा धेरै चलेको छारसुत्र उपचार विधिलगायत अन्य शल्य चिकित्साबाट उपचार गर्छाै । त्यसबाहेक अर्काे शालाक्यतन्त्र विभाग भन्छौ । शालाक्य भनेको उर्धजत्रुगत अर्थात् घाँटीभन्दा माथिका अंगहरु जस्तै ः नाक, कान, घाटी र आँखाका रोगहरु र समस्याहरुलाई पनि हामी आयुर्वेदको विभिन्न उपचार विधिमार्फत उपचार गर्छौं । त्यसबाहेक अर्काे स्त्रीप्रसुती र कौमारभृत्य विभाग रहेको छ, जसमा महिलाहरुका समस्या तथा बालबच्चाहरुका रोगहरुलाई आयुर्वेदिक तवरबाट उपचार गरिन्छ । र, त्यो बाहेक यस चिकित्सालयमा एउटा शाखाको रुपमा रहेको अकुपञ्चर चिकित्सा पनि छ । अकुपञ्चर चिकित्सा र फिजियोथेरापीका चिकित्सकहरुबाट विभिन्न खालका नसर्ने रोगहरु जस्तै उच्च रक्तचापले उत्पन्न गराएका प्यारालाइसिस बिरामीहरु, शरीर दुखाईका रोगीहरु साथै अन्य सोही बमोजिमका समस्याको उपचार सेवा यहाँ दिइन्छ ।
यो चिकित्सालय १ सय वर्ष पुगिसकेको छ । तर, यति पुरानो भएपनि अन्य पुराना अस्पतालहरुजस्तो किन प्रसिद्ध छैन ?
यो गज्जबको प्रश्न होे । प्रश्न सोध्न जति सजिलो छ, उत्तर दिन त्यति नै गाह्रो छ । यो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति भनेको पहिलेदेखि नै परम्परागत रुपमा मानिसले घर—घरमा सबैलाई ज्ञात भएको विषय हो । जस्तै, तपाईलाई रुघा लाग्यो भने अदुवा पानी खानुपर्छ भनेर तपाइलाई बुवाआमाले सिकाउनुभयो । त्यो पनि एउटा भान्छाको आयुर्वेद हो । आयुर्वेद भन्ने शब्द मान्छेले नबुभ्mने तर घरेलु उपचारका रुपमा सबैले चिनिने भएकोले त्यो एउटा शब्दसँगको कुरा हो । त्यसबाहेक पछिल्लो समयमा यो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई हामीले व्यवस्थित गर्न नसकेको र व्यवसायिक गर्न नसकेको हो यसलाई हामी ब्यवसायिकता भन्छौ । एउटा वस्तुलाई कसरी प्रस्तुत गरिन्छ त्यसै अनुसार त्यसको प्रभाव जनमानसमा पर्छ । हामी प्रस्तुतीकरणमा पछि परेको हुनाले यो कमैले नबुझेको र नसुनेको हुन सक्छ । हाम्रा कुरालाई जनता तथा जनमानसमा हामीले राम्रोसँग भन्न नसकेको, आफ्नो विज्ञापन गर्न नसकेको र प्रष्ट कुरा जनमानसमा पु¥याउन नसकेको कारणले हो । नत्र भने आयुर्वेद अथवा यो भित्रका कुराहरु नबुझेको र नसुनेको कोही पनि हुनुहुन्न । हामीले यसलाई प्रष्ट रुपमा भन्न सकेनौं । आफूलाई व्यवसायीकृत गर्न सकेनौ त्यही कारणले हो । यसलाई हामीले अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ । मान्छेहरु नयाँ—नयाँ कुरा पढेर आएका छन् । देश—विदेश गएर सिकेर आएका छन् । आयुर्वेद चिकित्सालाई जनमानसमा पु¥याउने गरी हामीले कुनै विशेष खालको संयन्त्र खोजी गरिहेका छौं ।
मासिक रुपमा औसत कति जना बिरामीहरु उपचारका लागि आउँछन् ?
यो केन्द्रीय अस्पताल हो । यो केन्द्रीय अस्पताल भएतापनि वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल अथवा प्रसुती केन्द्र र टेकुको अस्पतालजस्तोे बिरामीको चाप यहाँ छैन् । अघि नै भनिसके यहाँको सेवाको स्तर खस्कदो छ । अनि हामीले आयुर्वेद चिकित्साबारे जनताहरुलाई प्रष्ट रुपमा भन्न सकेनौं । यही नरदेवी छेउछाउको मानिसहरुलाई पनि थाहा छैन् यहाँ के–के रोगको उपचार हुन्छ भन्ने कुरा । यसले गर्दा विरामीको चाप उति धेरै छैन् । धेरै पहिले हामीले पढ्ने बेलामा बिरामीको ठूलो चाप हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो चाप नभएको नै हो तर बिरामी नै नभएको अवस्था चाहिँ होइन । दैनिक रुपमा एक दुई सय जतिको हाराहारी बिरामीहरु आउनु हुन्छ । र यहाँ जसले विशिष्ट सेवा दियो, जसले गुुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा दिनुभएको छ । ती शाखाहरुमा अहिले पनि बिरामीहरुको संख्या थेग्न नसक्ने छ । तर, आयुर्वेद भनेर आफूले आफूलाई र हामीले अरुलाई चिनाउन सकेनौ । र, हामीले दिन सक्ने के कुरा हो अरुभन्दा फरक त्यो कुरा जनताले थाहा पाउन सकेनन् । अरु अस्पतालहरु जस्तो वीर अस्पतालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कतिपय बिरामीहरुका लागि उपचारका विधी छैनन् होला । त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो परम्परागत र पुरक चिकित्साबाट उपचार गर्न सकिने धेरै ठाँउहरु छन् । यो कुरा हामीले वीर अस्पताललाई भन्न सकेनौ, बुझाउन सकेनौ । डाक्टर साब यो रोगको बिरामी हामीलाई पठाउनुहोस् भनेर भन्ने सकेनौं । हामीले यो कुराहरु गर्न सक्यौ र यो पक्षको उपचार गर्न सक्छौ भनी अरुलाई भन्न सक्यौ भने त्यसपछि बिरामीहरुको चाप बढिहाल्छ ।
प्रायःजसो कस्तो प्रकारका समस्याहरु लिएर बिरामीहरु यहाँ आउने गर्दछन् ?
यो अस्पतालमा धेरै पहिलेदेखि नै जीर्ण रोगहरु लिएर विरामीहरु आउने गर्नुहुन्छ । अन्त धेरै ठाउँमा हिडेर, थाकेर र उपचार नै सम्भव नभएर र नभएपछि अन्तिम अवस्थामा एकपट गइहालौ न त के हुन्छ भनेर हेर्ने हिसाबले पनि धेरै बिरामीहरु आउने गर्नुहुन्छ । तर, हाम्रो नजरमा पछिल्लो समयमा विशेषगरी नसर्ने जीर्ण रोगीहरु नै बढी आउने गर्नुहुन्छ । पेटको समस्यामा सबभन्दा बढी अम्लपित्तकै रोगी बढी छन् । जण्डिसको प्रख्यात अस्पताल भनेर पहिल्यैदेखि चिनिएको अस्पताल हो । त्यस्तै प्यारालाइसिस, अर्श (पाईल्स), भगन्दर (फिस्टुला) का बिरामीहरु धेरै आउनुहुन्छ । पञ्चकर्ममार्फत उपचार गर्नको लागि आउने बिरामीहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ । मुखहरु बागिंने, पेट दुख्ने, निन्द्रा नआउने, जोर्नीहरुका समस्याहरु लिएर बिरामीहरु यहाँ आउने गर्छन् । यी सबै रोगहरुको निदानमा हामीले राम्रै गरिरहेका छौं । हालसालै शालाक्यतन्त्र अन्तर्गत आँखा सम्बन्धीका उपचारहरु पनि सुरु गरेका छौं । काठमाडौंमा रहेको धेरै धुँवा धुलोका कारण आँखामा चिलाउँछन् । अस्पतालतिर गयौ भने आइड्रपहरु दिनुहुन्छ तर पनि निको हुँदैन । त्यसमा हाम्रोमा विशेष खालको उपचार विधी छ । त्यसले गर्दा बिरामीलाई पनि राम्रो भएको छ । शल्य चिकित्सा अन्र्तगत क्षारसुत्र चिकित्सा विधि प्रख्यात हुँदै गएको छ । छिट्टै नै अग्निकर्म, कपिङ, अलाबुवृत्त, आयुर्वेदिक अभ्यङ्ग, मर्म चिकित्सा आदि सुरु गर्न गैरहेका छौँ ।
के कारणले आयुर्वेद चिकित्सालयको अवस्था खस्कदो क्रममा पुगेको हो ?
पहिलो कुरा अस्पतालको स्वीकृत दरवन्दीअनुसार विशेषज्ञ जनशक्तिको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । जसकारण पूर्ण रुपमा चिकित्सा विभागहरु सञ्चालन गर्न समस्या देखिएको छ । विभिन्न विभागका नवौं/दशौ तहका डाक्टरहरु लोकसेवाबाट पनि हामीले माग गर्न नसकेका र विगतमा दक्ष जनशक्ति नभएको कारण आठौं तहका डाक्टरहरुले नै सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । म भर्खरै आएको हुनाले यसअघि जनशक्तिको पदपूर्ति गर्न माग किन गरिएन ? अथवा पदपूर्तिको लागि लगातार संस्थागत प्रयत्न किन हुन सकेन ? मैले बुझ्न सकेको छैन् । भएकै जनशक्तिहरु पनि हाल समायोजनको कारणले अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था आएको छ । विशेषज्ञ जनशक्ति बजारमा हुँदाहुँदैं पनि सेवा प्रदान गर्न गाह्रो परिरहेको अवस्था छ । त्यो बाहेक प्रशासनिक क्षेत्रमा यो क्षेत्र लामो समयसम्म निर्देशकबिहीन हुनु पनि एक कारण हुन सक्छ । वि सं २०६५ सालदेखि हालसम्म निमित्त निर्देशकको रुपमा प्रशासनिक हेरफेरले पनि केही असर गरेको छ ।
यसबाहेक अस्पतालमा मिही बलियो भयो मिहीको वरिपरी हिँड्ने जनशक्तिहरु पनि मिहीबाट टाढा भाग्न सक्दैनन् । तर, मिही नै डगमगाएको कारण यसको अवस्था नाजुक हुन पुग्यो । कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो क्लिनिकहरु खोल्ने, त्यही बिरामी बोलाउने र औषधीहरु अन्त किन्न पठाउने, अस्पतालले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधि समयमा नबनाउने आदि कारणले पनि अस्पतालको अवस्था खस्केको हो । यस्तै, ब्यवस्थापन गर्न नसकिएको फोहोरमैला, अस्पतालको भित्री संरचनागत ठाउँहरु मर्मत तथा सम्भार गर्न नसकिएको कारण चिकित्सालयको बाहिरी मुहार नै एकदमै कुरुप बनेको छ । अस्पतालमा गरिने जथाभावी अनाधिकृत पार्किङका कारण पनि समस्या भैरहेको छ । यो अस्पताल अहिले सुन पसलेदेखि नुन पसलेसम्मको पार्किङस्थल बनेको छ । के पनि सुन्नमा आएको छ भने लागु दुव्र्यसनकारीहरु अस्पतालमा नै पसी आफ्नो कामहरु गर्छन् रे । यसबाट अस्पताल असुरक्षित समेत हुन पुगेको छ । व्यवस्थापन गर्न नसकिएको फोहोरमैला, सिमित उपलब्ध स्रोत साधन आदिका कारण एउटा ऐतिहासिक चिकित्सालयको यस्तो अवस्था हुन पुगेको हो । यदि हामीले यस पक्षमा विशेष ध्यान दिइएन भने यो अस्पताल इतिहासमा नै सिमित रहने देखिन्छ ।
अस्पतालमा दुई बजेपछि चिकित्सक नै हुँदैनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ?
हो, यो आंशिक रुपमा सत्य हो । हामीले अस्पतालभित्र आगामी दिनहरुमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा (ईएचएस) ३ देखि ५ बजेसम्म समय तोकी सो बमोजिम सेवा दिने सोच बनाएका छौं । तर, हाल संघमा समायोजन भएका चिकित्सकहरु समयमै पदस्थापना नभएको र हाल सेवारत चिकित्सकहरु पनि हतार गरेर समायोजन भएको प्रदेशमा गैसक्नुभएको छ । समायोजनका कारण र सिमित जनशक्तिको कारण पनि यो समस्या देखिएको हो । अब छिट्टै ब्यवस्थित रुपमा हामीले सेवा उपलब्ध गराउनेछौं ।
अस्पतालले बिरामीहरुबाट कतिको आम्दानी गरिरहेको छ ?
यो अस्पताल कुनै नाफामूलक हिसाबले सञ्चालित अस्पताल होइन् । नेपाल सरकारको सहयोगमा सञ्चालित अस्पताल भएकाले कतिपय अवस्थामा हामीले सिमित स्रोत साधनबाट उपलब्ध औषधिहरु र सेवाहरु प्रदान गर्दै आएका छौं । जसबाट दैनिक ५० देखि ८० हजारको हाराहारीमा रकम संकलन हुने गरेको छ । यसबाहेक क्यान्टिन, ल्याब, सटरकोठाहरुबाट आउने भाडा आदिबाट हुने मासिक आम्दानी यकिन त छैन् । तर, त्यहाँबाट पनि अस्पताललाई आम्दानी भैरहेको छ ।
अस्पताललाई गुणस्तरीय बनाउनको निम्ति तपाईंको योजना के छ ?
योजना धेरै हुन सक्छन् । छोटकरीमा भन्नुपर्दा सकेसम्म धेरै बिरामीहरुलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु नै हाम्रो पहिलो ध्येय रहेको छ । यसका लागि चिकित्सालयको आन्तरिक सुधार नै पहिलो योजना हो । चिकित्सकहरुलाई आन्तरिक तवरमा सुधार गर्ने र उहाँहरुलाई नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्न लगाउनु नै पहिलो कदम हुन आउँछ । उहाँहरुले सरकारी तलब खाइसकेपछि नैतिकता बहन गरी हाँसीखुशीका साथ तोकिएको समयसम्म सेवा प्रदान गर्र्नैपर्छ । उहाँहरुमा यस विषयमा सुधार नभएसम्म अरु नयाँ सुधार केही हुन सक्दैन् । र अर्को हो, गुणस्तरीय औषधिको वितरण । अहिले बजारमा आयुर्वेदिक औषधिहरु गुणस्तरहीन भए भन्ने कुरा आइरहेको छ । मेरो योजना यहाँ उत्पादित औषधिहरु म आफैले ढुक्कसँग खानसक्ने हामीले बनाउनेछौँ र ढुक्कका साथ बिरामीहरुलाई निःशुल्क वितरण गर्नेछौँ । यसैगरी, नर्सिङ सेवाको विस्तार गर्ने पनि हाम्रो योजना रहेको छ, जसमा पनि चिकित्सकको ठूलो हात हुन्छ । यसबाहेक प्रशासनिक क्षेत्रको सुधारका कुराहरु पनि अगाडि बढाउने योजनामा छु । हामीले सरकारबाट अपेक्षाकृत सहयोग त पाइराखेका छौँ तर हामी यस क्षेत्रमा सरकारको निगरानीपूर्ण सहयोग र लगानी चाहान्छौं । सरकारले यस अस्पतालमा गरिएको लगानीको पनि लेखाजोखा राख्नु आवश्यक छ । तसर्थ, सरकारले यसबारे प्रत्यक्ष जानकारी हासिल गरी आर्थिक रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ । अन्यथा, हामी अपांग सरह हुन्छौं । आशा छ, नेपाल सरकारले यस विषयमा सकारात्मक भै सहयोग गर्नेछ ।